Colaado ka soo cusboonaaday Tana River oo ay ku dhinteen 11 qof - Sabahionline.com
Colaado ka soo cusboonaaday Tana River oo ay ku dhinteen 11 qof
Sibteembar 07, 2012
Colaado ka soo cusboonaaday gobolka Tana River Delta ee Kenya ayaa sababay dhimashada 11 qof Jimcihii (7-dii September), sida ay warisay wakaaladda wararka ee AFP.
Mas'uul Kenyan ah oo shaqadiisii ku waayay colaadaha Tana River Delta
Kenya oo 1,500 oo bilayska millatariga ah u diraysa Tana River si ay u joojiyaan colaadda qabiiliga ah
Bandoow lagu soo rogay Tana River Delta kadib markii ay dhimashadu korortay
Qalalaasaha Tana River Delta waxaa uu keenay wajji cusub oo caqabad ku ah ammaanka kenya
"Weerarro cusub oo ka dhacay Tana River ayaa waxa ku nafwaayay 11 qof, iyada oo ay ku dhaawacmeen 10 qof oo isbitaal la geeyay," ayuu yiri mas'uul ka tirsan Laan-Qaydha Cas ee Kenya Nelly Muluka. Waxa ay sheegtay in weerarradu ahaayeen aargoosi ku aaddan dagaalladii dhex maray beelaha Orma iyo Pokomo kuwaa oo ay ku dhinteen 52 qof bishii August.
Tuuladii ayaa cagta la mariyay xoolihiina waa lakala yaaciyay weerar ka dhacay tuulada chamwanamuma, sida uu sheegay Daily Naiton-ka Kenya. Laan-Qaydha Cas ayaa sheegay in 300 oo lo' ah iyo 400 oo ari ah la waayay.
Dhinaca kalena, Kaaliyaha Wasiirka Xannaanada Xoolaha Dhadho godhana ayaa Khamiistii bilayska Kenya siiyay hadal, kaasoo uu ku beeniyay eedeeynta ah in uu ka horyimid dadaalladii nabadda lagu dhisayay, sdiaana waxa sheegay Daily Nation-ka Kenya.
Sii hayaha Wasiirka Amniga Gudaha Yuusuf Xaaji ayaa ku eedeeyay Godhana in uu ku fashilay ka soo qayb-galka kulanka hoggaamiyayaasha sifo dib loogu soo dhiso xiriirka labada beelood ee Pokoma-da iyo Orma-da.
"Waxan diyaar u ahay in aan Waaxda Baarista Dambiyada la shaqeeyo si aan gacan uga gaysto soo qabashada kuwii weerarka geeystay," ayuu yiri Godhana, isaga oo xaaladda kacsan ee Tana River ku eedeeyay in ay salka ku hayso ajandayaal siyaasadeed. "In nabad waarta laga gaaro gobolka wax fudud maaha inta ay uu jiro khilaafka ka dhex taagan hoggaamiyayaasha," ayuu yiri.